Latest news about Federal Airport Authority of Nigeria from Nigeria & world | TODAY.NG
Home Tags Federal Airport Authority of Nigeria
Gọvanọ Bindow amalitere atụmatụ iwulite ụgbọ elu dị na Mubi
Gov. Mohammed Bindow nke Adamawa kwuru na nchịkwa ya amalitela atụmatụ iji wuo ọdụ ụgbọ elu na Mubi dị na steeti iji kwalite akụ na ụba na steeti.
Minista na-ahụ maka ụgbọelu na-ahụ maka ọdụ ụgbọelu
Onye nzuko ahụ na-atụle ịkpọ Hadi Sirika, onye ụkọchukwu nke ala maka ụgbọelu, n'elu ihe mberede ụgbọelu na-adịbeghị anya.
NCAA, AIB weputara nyocha mgbe Dana Air ụgbọelu gbafere ụgbọelu
Ndi Naijiria Civil Aviation Authority, NCAA, amalitela nyocha banyere ot 'u Dana Air si kpuchie uzo di na Port Harcourt International Airport.
Federal govt amalite nyocha mgbe Dana Air ụgbọelu overshoots Port Harcourt ọdụ ụgbọ elu runway
Ndị isi ụgbọelu Nigeria kwuru na Wednesday, ha malitere nyocha na otu ụgbọelu ụgbọelu ga-esi gbapụ n'okporo ụzọ ahụ mgbe ọ na-asọba na Port Harcourt.
Dana Air: CPC na-achọ ime ihe maka ndị njem
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị ahịa (CPC) agwala Dana Dana ụgbọelu ka ọ kwadoro ndị ọrụ ụgbọelu dị na ya na ụgbọ elu ya na ụgbọ elu ya na-aga na Port Harcourt na Tuesday.
Ihe ndekọ FAAN 68% revenue na-abawanye site na akpaaka nke ogige ụgbọala ụgbọala MMIA
Òtù Na-ahụ Maka Njikwa Airport nke Nigeria (FAAN) na-ekwu na ego a na-akwụ kwa ọnwa site na 68 pasent na-esote mmeghe nke ọrụ akpaghị aka na ogige ntụrụndụ ọhụrụ dị na Murtala Muhammed Airport (MMIA), Lagos.
NCAA na-achụpụ ụgbọelu ụgbọ elu ụgbọelu
Ndi Nigeria Civil Aviation Authority (NCAA) emeela ka ndi mmadu kwue na ugbua na ugbo elu ya.
Ụgbọelu ụgbọ elu ụgbọelu na-aga na ọdụ ụgbọelu Lagos
Burglars a na-atụ anya ya wakporo ụgbọelu nke Air Air na Murtala Muhammed International Airport, Lagos, ebe ọ na-aga ịpụ na Thursday.
Naanị ụgbọ ala Dana na-agbapụ na mgbochi ikuku - FAAN
Ọnụ ọnụ na-ekwuchitere Federal Airport Authority of Nigeria (FAAN), Oriaku Henrietta Yakubu, na Satọdee, kọrọ akụkọ banyere ụgbọelu ụgbọelu nke Dana Air na Nanndi Azikiwe International Airport, Abuja.
Minista Isaac Adewole na-eduzi Libya ka ọ laghachi azụ iji nyochaa ahụ ike
Onye Minista Ahụike, Prọfesọ Isaac Adewole, agwala ndị Libya nile ka ha gaghachiri nyocha ahụike tupu ha ahapụ obodo ha.
Ọrụ EFCC bụ ọrụ Ibrahim Magu bụ ndị ọrụ ụgbọelu na-arụ ọrụ ọma
Onye isi oche nke Ụlọọrụ Economic Crime na Mmebi Iwu (EFCC), Maazị Ibrahim Magu, rịọrọ ndị Niger ka ha bụrụ ihe dị mkpa ka ha ghara ịchọta àgwà, omume na àgwà ndị na-eme ka a mara aha obodo ahụ.
Ọ dị ọnụ ala iji gbochie nrụrụ aka karịa ịlụ ọgụ ya - onyeisi oche EFCC Ibrahim Magu
Ibrahim Magu, onye isi oche, Commission Economic Crime (Financial) Commission (EFCC) kwuru na ọ dị ọnụ ala iji gbochie nrụrụ aka karịa ịlụ ọgụ.
FAAN na agba ume Cross River iji meziwanye ihe na ụlọ akwụkwọ
Federal Airport Authority of Nigeria (FAAN) akpọwo maka inweta ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-eme ka ịmụtakwu ihe n'ụlọ akwụkwọ dị na Cross River State.
Onye na-arịọ ya n'ụlọikpe maka ịwakpo onye uweojii
Onye na-achọ 40, Olufemi Salau, onye kwuru na ya etigidere onye uweojii, nọ na Friday na ebubo ya na Ụlọ Ike Magistrates na Lagos.
Ọkpụkpọ ọkọlọtọ nke ọkọlọtọ Lagos na-aga n'okporo ụzọ nke Oshodi-Int'l nke okporo ụzọ 10
Lagos State Government on Monday amachibidoro nwughari nke Oshodi-International Airport Road, na nkwa iji mezue oru ngo n'ime ọnwa 15 sochirinụ.